Chikunguru 15, 2018 arun
akatisiyira Price: Great Purofiti muganhu Solid Week
YeSvondo Vanogara mazuva dzinonakidza nokuda cryptocurrency indasitiri. Kunyange paine kazhinji wandei kunaka musika nevezera, Svondo rino anozova akasiyana chaizvo. The akatisiyira mutengo anoramba mhanyisa sezvo mberi pavhiki-refu uptrend pasina shure vakawandisa.
Akatisiyira Price twi pamusoro $ 0.215
A Mazuva mashoma apfuura zvakava pachena kuti akatisiyira mutengo rakanga riri kurudyi njanji. Pashure pfupi kwakamutsigira zvichikwira tichimhanya, ari akatisiyira mutengo yaiva nekaupenyu chiedza pa $ 0.18. Muitiro iwoyo wakapfuurira kubvira, pamwe XLM achiri achimuka. Aine kuitika mutengo $ 0.217, rinotsvaka runako zvakanaka twa ichi.
Mumakore 24 maawa paiva nomumwe 9.4% Akatisiyira mutengo kuwedzera. Izvi zvinoshamisa pacharwo, kunyange dzinowanzotsigi- rinosundwa ano zvakanaka Bitcoin mutengo muitiro. Kana Bitcoin akarasikirwa ukoshi, vashoma chaizvo mari kuti zvinobudirira kuona ukoshi yakawedzerwa, asi akatisiyira wakanaka pamusoro yayo. Kana ichi zvazvingava rinei, hazvina kashoma kuti akatisiyira mutengo $ 0.25 inotarisirwa mumazuva mashomanana.
Sezvaitarisirwa kubva ichi pfupi mutengo tichimhanya, mamiriro ano iri akwanise ne nokuwedzera XLM / BTC nokupesana. Izvi kutengeserana kumucheto wakakwira nenzira 7.14% mu wokupedzisira 24 maawa, kureva kuti kudiwa vachitenga uye vachitengesa XLM iri pari kuwedzera. Kana iri inogona kuenderera mamiriro ezvinhu-yakareba kana kwete Zvakaoma chaizvo kufungidzira panguva ino.
Akatisiyira Maonero mutengo tichimhanya iri pasinei yakaderera chaizvo wokutengesera vhoriyamu kwose. kunyange zvazvo munhu $ 47.58 miriyoni vhoriyamu hazvisi zvakaipa, zviri chaizvoizvo hapana zvichienzaniswa kutarisira chii ungadai kwakapiwa kuitika akatisiyira tichimhanya. Asi, zviri kupfuura zvakakwana kuramba ichi muitiro, kunyange kana mamiriro ezvinhu aigona kuchinja pamusoro mazuva mashomanana anotevera.
Rakafanana pakutanga svondo rino, Binance ndiye aitungamirira wokutengesera vhoriyamu. BTC uye USDT ake maviri chamutsa pamusoro 38.7% pamusoro zvakaenda zvose. BCEX kuti CKUSD peya ndiyo yechitatu, uchiteverwa maviri CoinEgg uye BCEX BTC vaviri vaviri. misika zvose izvi kunakidza kwazvo uno XLM tichimhanya, kunyange hazvo yakawanda guta yakachena kunouya pamusoro musika.
Kana akatisiyira mutengo anogona kuramba kumuka zvakasiyana zvachose nyaya. YeSvondo mazuva akasiyana chaizvo zvichienzaniswa vamwe vhiki sezvo vasiri chiratidzo zvakarurama musika manzwiro ari cryptocurrency. Apo zvinhu kudzokera dzose neMuvhuro, mamiriro ezvinhu nokuti XLM nezvimwe misika zvose vangatarira zvakasiyana chaizvo.
Kraken Daily Market Mushumo 14.07.2018
$44.4M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Kupfuurisa 1200 magazine retail...